စူပါမွန်း - ဝီကီပီးဒီးယား
သာမန်လနှင့် ၂၀၁၀ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် စူပါမွန်းတို့ကို နှိုင်းယှဉ်ပြပုံ
စူပါမွန်း (အင်္ဂလိပ်: Supermoon) ဆိုသည်မှာ လနှင့်ကမ္ဘာ အလွန်နီးကပ်လာပြီး၊ အနီးဆုံး လပြည့်ညကို ခေါ်ဆိုသည်။ စူပါမွန်း ဖြစ်နေချိန်မှာ လနှင့် ကမ္ဘာတို့၏ အကွာအဝေးသည် ၃၅၆,၅၇၇ ကီလိုမီတာ (၂၂၁,၅၆၆ မိုင်) အကွာမှာရှိနေခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် လကို ကမ္ဘာမှကြည့်လျှင် သာမန်လထက် အရွယ်အစား ၁၄% ထိပိုကြီးလာပြီး တောက်ပမှုမှာ ၃၀% ထိပိုလာနိုင်ကြောင်း နာဆာကဆိုသည်။  လနှင့်ပတ်သက်သည့် ပင်လယ်ရေနှင့် ဒီရေအဖွဲ့အစည်းများက စူပါမွန်းဖြစ်စဉ်နှင့် မြေငလျင်ကြီးများ လှုပ်ရှားခြင်း၊ မီးတောင်ပေါက်ကွဲခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်မှုတို့သည် ဆက်စပ်နေသည်ဟု ခန့်မှန်းပြောဆိုကြသော်လည်း၊ ယင်းကိစ္စများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ထင်ရှားသောအထောက်အထား မရှိပေ။
စူပါမွန်းဆိုသော ဝေါဟာရကို နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင် ရစ်ချတ်နိုးလ်လီ(Richard Nolle) က ၁၉၇၉-ခုနှစ်မှာ အမည်ပေးထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ မူရင်းအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်က ပတ်လမ်းတစ်ခုဖြင့် ကမ္ဘာကို လှည့်ပတ်နေသည့်လသည် နေ၊ လ၊ ကမ္ဘာတို့ တစ်တန်းတည်း ကျသွားသည့် အချိန်မှာ လသည် ကမ္ဘာနှင့် အနီးကပ်ဆုံး အကွာအဝေးသို့ ရောက်ရှိနေစဉ် တွေ့မြင်ရသည့် အခြေအနေကို ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ အမှန်အားဖြင့် စူပါမွန်းဟူသော ဝေါဟာရမှာ ပညာရပ် အခေါ်အားဖြင့် perlgee syzygy ဟု ခေါ်ဆိုပြီး အဓိပ္ပာယ်မှာ နေ၊ လ၊ ကမ္ဘာတို့ တစ်တန်းတည်း ကျရောက်နေစဉ် လသည် ကမ္ဘာနှင့် အနီးဆုံး အကွာအဝေးသို့ ရောက်ရှိနေခြင်းကို ခေါ်ဝေါ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းဖြစ်စဉ်သည် လပြည့်(full moon) သို့မဟုတ် လဆန်း(new moon) ဖြစ်စဉ်တိုင်းတွင် ကြုံတွေ့နိုင်သည်။
၁ ဖြစ်ပေါ်မှု ကြိမ်နှုန်းများ
၂ ဒီရေအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု
၃ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ကျရောက်ခြင်း
Full moon cycle ဆိုသည်မှာ နေ လ ကမ္ဘာ တစ်တန်းတည်း ကျရောက်သော ဖြစ်စဉ် တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြား ကြာမြင့်ချိန်ဖြစ်ပြီး အကြမ်းအားဖြင့် ၄၁၁.၈ ရက်တွင် တစ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။ တနည်းပြောရလျှင် full moon (၁၄)ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်တိုင်း စူပါမွန်းတစ်ကြိမ် ဖြစ်ပေါ်လေ့ ရှိသည်။ အကြမ်းအားဖြင့် full moon cycle တစ်ကြိမ်တွင် စူပါမွန်း(၃)ကြိမ် ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။ နောက်ဆုံးအကြိမ် စူပါမွန်းကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၇-၂၈ ရက်ညများတွင် မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ သမုဒ္ဒရာ ရေပြင်များ အပေါ်တွင် နေနှင့်လ တို့၏ ပူးတွဲ အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့် လသည် full moon သို့မဟုတ် new moon ဖြစ်တိုင်း ကမ္ဘာပေါ်ရှိ သမုဒ္ဒရာအတွင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်သော ဒီရေလှိုင်းတို့သည် အကြီးဆုံး ဖြစ်ပေါ်လေ့ ရှိကြသည်။ အထူးသဖြင့် lunar perlgee ဖြစ်သော ကာလတွင် ဒီရေ အတက်အကျသည် အားအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ယင်းကို perlgean sprlngticle ဟု ခေါ်ဆိုသည်။ သို့သော် ဒီရေသည် လက်တွေ့ဒီရေလှိုင်းမှာ လက္မအနည်းငယ်သာ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်စေတတ်သည်။
သို့ရာတွင် ဒီရေအပေါ်၌ သက်ရောက်သော အားမှာ an inverse-cube law ၏ ပြောင်းလဲနေမှုကြောင့် ဒီရေလှိုင်း၏ အားပမာဏမှာ ပျမ်းမျှတန်ဖိုးများထက် ၁၉%ခန့် ပိုမိုအားကောင်း နိုင်သည်။ သို့ရာတွင် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်၌ ဖြစ်ပေါ်သော ဒီရေလှိုင်းများသည် နေရာဒေသအလိုက် အပြောင်းအလဲများ ရှိတတ်ကြသည့် အတွက် ဒီရေလှိုင်းများအပေါ် သိသိသာသာ ထူးခြားသော အကျိုးသက်ရောက်မှုကို မတွေ့ကြရပေ။
၂၀၁၁-ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၉)ရက်နေ့တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော စူပါမွန်းဖြစ်စဉ်မှာ UKနိုင်ငံ Sol-ent ဒေသ၌ သင်္ဘော ငါးစီး နစ်မြုပ်ခဲ့ရခြင်းတွင် စူပါမွန်းနှင့် ဆက်စပ်မှု ရှိနေကြောင်း ပြောဆိုမှုများ ရှိခဲ့သော်လည်း ယနေ့အချိန်ထိ သက်သေအထောက်အထား မပြနိုင်သေးပေ။
၂၀၁၁-ခုနှစ်တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ဂျပန်နိုင်ငံ တိုဟာကူ (Toha ku)ဒေသ၌ ရေအောက်မြေငလျင် လှုပ်ခဲ့ခြင်းနှင့်အတူ ဆူနာမီ ရေလှိုင်းများ ကျရောက်ခြင်းဖြစ်စဉ်၊ ၂၀၀၄-ခုနှစ် အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတွင် လှုပ်ခတ်ခဲ့သော ရေအောက်မြေငလျင်နှင့် ဆူနာမီ ရေလှိုင်းများ ကျရောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်စဉ် စသည်တို့သည် စူပါမွန်းဖြစ်စဉ်နှင့် ဆက်စပ်မှု ရှိကြောင်း လူအများက သုံးသပ်ပြောဆိုမှု၊ ကောလာဟာလ ပြောဆိုမှုများ ရှိခဲ့သော်လည်း ယနေ့အချိန်ထိ ခိုင်မာသော သက်သေအထောက်အထားများ ပြသနိုင်ခြင်း မရှိသေးပေ။
↑ Science@NASA Headline News. NASA. Archived from the original on May 7, 2012. Retrieved 22 June 2013.
↑ Paquette, Mark (March 1, 2011). "Extreme Super (Full) Moon to Cause Chaos?". Astronomy Weather Blog. AccuWeather. Retrieved 14 March 2011;.
↑ "Can the position of the Moon affect seismicity?". The Berkeley Seismological Laboratory. 1999. Retrieved 14 March 2011.
↑ Vernal Equinox 2015: Solar eclipse, supermoon kick off spring in the Northern Hemisphere။ Washington Post။ 21 March 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Wikimedia Commons ရှိ စူပါမွန်း နှင့်ပတ်သက်သော မီဒီယာများ
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စူပါမွန်း&oldid=700320" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၁၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။